डा. हर्कबहादुर छेत्रीले दिए राजिनामा – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङडा. हर्कबहादुर छेत्रीले दिए राजिनामा
डा. हर्कबहादुर छेत्रीले दिए राजिनामा
May 10, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ 0
कालेबुङ खबरदाता, 10 मई।
जन आन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले नर्थ बेङ्गल डेभलोपमेन्ट बोर्डबाट राजिनामा दिएका छन्। विश्वस्त सूत्रले बताए अनुसार डा. छेत्रीलाई बोर्डमा नामको मात्र उपाध्यक्ष पद् दिइएको थियो, जिम्मेवारी भने दिइएको थिएन।
केही दिन अघि जन आन्दोलन पार्टीको मेरुदण्ड युसुफ सिमिकलाई राज्य सरकारले मायल्याङ लेप्चा डेभलोपमेन्ट बोर्डको उपाध्यक्ष पद्बाट निष्कासन गरेको थियो।
डा. छेत्री शुरुमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित निक्कै नजिकमा थिए। मोर्चाबाट राजिनामा दिएपछि उनले तृणमूल काङ्ग्रेसका धेरैवटा जनसभाहरूमा पनि बोलिसकेका थिए। कालेबुङ जिल्लाको माग लिएर आफ्नो विधायकत्वलाई बँचाएर राखेका थिए। मुख्यमन्त्रीले शुरुमा उनकै नाम लिएर कालेबुङ जिल्लाको घोषणा गरेकी थिइन्, जतिबेला उनको सम्बन्ध व्यानर्जीसित घनिष्ट थियो।
डा. छेत्रीले कालेबुङ जिल्लाको घोषणापछि जन आन्दोलन पार्टी गठन गरेर विधानसभा चुनाउ लडेका थिए, तर उनको नराम्रो गरी हार भयो। त्यसयता डा. छेत्री आफ्नो पार्टीमा नै सक्रिय छन्।
विधानसभा चुनाउमा ममता व्यानर्जीले डा. छेत्रीको नाम तृणमूल उम्मेदवारकोरूपमा लिएदेखि नै डा. छेत्री र ममता तथा कोलकत्ताका तृणमूल नेताहरूसित खटपट शुरु भएको थियो।
डा. छेत्री तृणमूल काङ्ग्रेसमा नपसी राज्य सरकारको पक्षमा नै काम गर्न चाहन्थे। त्यसै कारण विकासको मुद्दा लिएर जन आन्दोलन पार्टी गठन पनि गरेका हुन्। तृणमूल काङ्ग्रेसमाथि पहाडी जनताको भावना राम्रोसित नगाँसिने भएकोले पनि डा. छेत्री तृणमूल काङ्ग्रेसमा पसिहाल्न सकेनन्। ममता व्यानर्जीले ठाडो भाषामा ‘गोर्खाल्याण्ड होबेना’ भन्ने गरेकाले पनि डा. छेत्रीलाई राज्यका तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता, मन्त्री, विधायकहरूसित तालमेल मिलाएर काम गर्न गाह्रो थियो। यद्धपि ममता व्यानर्जीले रुचाएका नेता थिए, डा. हर्क।
पछि कालेबुङमा नै आएर ममता व्याननर्जीले ‘मैले कसैले भनेर जिल्ला दिएको होइन’ भनिदिएपछि भने डा. छेत्रीले विस्तारै तृणमूल र ममता व्यानर्जी विरुद्ध मुख खोल्न थालेका थिए। उनले राज्य सरकार र ममता व्यानर्जी विरुद्ध मुख खोलेपछि नै ममता र तृणमूल काङ्ग्रेसका नेताहरूसित डा. छेत्रीको तालमेन मिल्न छोडेको सूत्र बताउँछ।
कोलकाता सूत्रले बताए अनुसार जन आन्दोलन पार्टीले तृणमूल काङ्ग्रेस वा ममता व्यानर्जीले भनेकोजस्तो काम गरिदिएन। त्यसकारण डा. छेत्रीसित मुख्यमन्त्रीको मोह भङ्ग भइसकेको छ। सूत्रले बताए अनुसार हिल टीएमसीबाट डा. छेत्री, जन आन्दोलन पार्टी र केही बोर्डका पदाधिकारीहरू विरुद्ध नकरात्मक रिपोर्टिङ गएको छ। जसको आधारमा नै युसुफ सिमिकलाई बोर्डको उपाध्यक्षबाट निष्कासन गरिएको हो। सूत्रले बताए अनुसार सिमिकलाई झैँ नोटिस कुनै पनि बोर्डको अझ दुईजनालाई आउन सक्ने सम्भावना छ।
सिमिकको निष्कासनपछि नै डा. छेत्रीले नर्थ बेङ्गाल डेभलोपमेन्ट बोर्डबाट राजिनामा दिने हल्ला चलेको थियो तर त्यसबेला उनले राजिनामा दिएनन्।
खबरम्यागजिनसित डा. छेत्रीले भने, ‘राजिनामा तयार छ, भोलि राज्यपालको हातमा थमाउनेछु।’
यद्धपि राजिनामाको कारण भने उनले खुलाइहालेका छैनन्।
दवेन्द्र शर्मा पक्राउ
साँच्चै कालेबुङले मिस् गऱ्यो
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (40,852)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (35,804)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (33,064)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (30,738)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (27,406)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (24,918)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (23,889)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (23,444)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (22,499)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (22,006)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (21,849)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (21,428)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (20,810)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (20,752)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (20,261)